$1,000 ILLAA $4,000 KU GUULAYSO OO KA QAYBQAADO TARTAN KAHORTAGGA SIGAARKA & TUBAAKADA – Radio Daljir
$1,000 ILLAA $4,000 KU GUULAYSO OO KA QAYBQAADO TARTAN KAHORTAGGA SIGAARKA & TUBAAKADA
Abriil 18, 2021 6:07 g 9
2021 “Lies & Cover-Ups: Time to Make Tobacco Pay” Global Media Competition
Donor: Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC)
Area: Health, Media
Participants below 18 years old are required to submit a parental/guardian consent form.
For more information, visit GGTC (RIIX LINKIGA HORE OO KA QAYBQAADO KAHORTAGGA ISTICMAALKA SIGAARKA IYO TUBAAKADA)
Fursadaha 317 Ogeysiis 99
WARSHADDII KALLUUNKA LAASQORAY, SANAAG
Shaafici maxamed 4 months ago
Dhibaatooyinka Sigaarka Iyo Cudurrada Laga Qaado
Caafimaadka shaqsiga ayaa ah mid muhiimad balaaran ku fadhiya waxaana wadamo badan ay ku bixiyaan miisaaniyad aad u fara badan si loo helo bulsho caafimaad qabta. Cabida sigaarka ayaa saamayn balaaran ku leh caafimaad qabka qofka, waxaana lala xariirayaa inuu sababo xanuuno tiro badan oo qaarkood ay adagtahay in la daweeyo. Sigaarku waxuu kaloo waxyeelo balaaran u geystaa dadka lagu ag cabbo.
Sigaarka ayaa ka kooban tubaako iyo ugu yaraan 600 oo kiimikaalo ah, tubaakada iyo kiimikaaladda uu ka koobanyahay sigaarku ayaa dhamaantood ah kuwo keeni kara xanuuno ku dhaca qaybaha kala duwan ee jirka. Xanuunada uu sababo qaarkood ayaa ah kuwo ku yimaada markii la cabo sanado badan. Caafimaad ahaan sinaba faaiido uma lahan cabida sigaarku. Waxaana bahda caafimaadku marwalba dhiirigalisaa sidii loo joojin lahaa maadaama waxyeeladiisu ay aad u sareyso.
Sigaarka ayaa ah sababta koowaad ee kansarka ku dhaca sambabada. Kaankaradaan ayaa ah mid rajadeedu aad u liidan karto maadaama aysan jirin daawo. Waxaana ay ku fidi kartaa qaybaha kala duwan ee jirka iyadoo u raacaysa dhiiga ama limfiga. Marka kiimikaalada wasaqda ah ee ku jira sigaarka ay ku nagaadaan sambabada waxaa adkaanaysa in lagu nadiifo qufac, waxaana tani keenaysaa in qofka caba sigaarka uu u sahlanaado xanuunada sida infekshinka iyo hargabka. Sigaarka ayaa sidoo kale ah sababe xanuunada loo yaqaan COPD kuwaasoo caan ku ah inuu xirmo qayb kamid ah hawo mareenka ama ay burburaan unugyada loo yaqaano alveoli ee qaabilsan kala badalka ogsijiinta iyo wasaqda ka timaada jirka ee loo yaqaan CO2.
Guud ahaan waxaa uu sigaarku ka qayb qaata waliba uu ka yahay qodobka koowaad kansarro badan oo ku dhaca xubnaha jirka sida, afka, ugxansidaha dumarka, sambabada, kilyaha, ganaca, hunguriga madow, iyo caloosha. Sigaarka ayaa sidoo kale noqon kara sabab uu yeesho xanuunka alsarka. Waxuu saamayn ku yeelan kara qanjirada soo daayo hormoonka loo yaqaano insulin kaasoo saxa xadiga sonkorta ee ku jirta dhiiga.
Sigaarka ayaa la rumaysanyahay inuu sababo dhiig kar, waxaana uu faragelin ku sameeyaa habka shaqada ee xididada yaryar. Taasoo keenta inuu siyaado cadaadiska uu dhiigu ku marayo. Waxaa uu hoos u dhigaa baruurta wanaagsan isagoo kor u qaada mida xun waxayna tani keeni karta in gudaha xididka ay ku abuuranto baruurta xunto taasoo ugu danbeyn gufeyn karta noqonaysana xanuun horleh oo saameeyay xididaha, khaasatan kuwa wadnaha. Tani waxay keeni kartaa in qayb kamid ah muruqa wadnuhu ay waydo dhiig iyo macdan ku filan iyadoo ugu danbeyn unugyada muruqu ay udhiman karaan marxaladaan, waxaana macquula in qofku uu wadnuhu istaago maadaama isu-soo arurida muruqa wadnuhu uu yahay mid aan wanaagsanayn. Sigaarka ayaa keeni kara in xididada maskaxda u qaada dhiiga ay dhumucdoodu yaraato, taasoo keeni karta xanuunka loo yaqaano faalug.
Dumarka caba sigaarka ayaa ah kuwo halis ugu jira waxyeeladiisa gaar ahaan xiliyada ay uurka leeyihiin. Waxuu saamayn toos ah ku yeelan karaa ilmaha ku jira uurka. Waxuu sababi karaa in ilmuhu uu ku dhasho cilado caafimaad oo qaarkood ay adagtahay in lala tacaalo. Dumarka uu ku dhaco kansarka ku dhaca afaafka hore ee ilma galeenka ayaa la ogaaday in intooda badan yihiin kuwo caba sigaarka wallow ay yeelan karaan sababo kale.
Sigaarku waxuu u xunyahay habka taranka, maadaama uu yareeyo dhumucda xididada jirka, waxaa uu saamayn ku yeelan karaa habka kacsiga labada jinsi.
Ragg badan oo caba sigaarka ayaa la ogaaday inaysan kacsan karin ama ay waqti badan ku qaadato. Sigaarku waxuu yareeyaa soo saarida shahwada ragga waxuuna keeni karaa in kansar uu ku dhaco xaniinyahaya ragga.
Dadka caba sigaarka ayaa lafahoodu yihiin kuwo awoodoodu liidato ayagoo gaari kara heer ay jabaan. Kalagoysyada oo xanuuna ayaa lagu arkay inbadan oo kamid ah dadka caba sigaarka, waxaana marwalba ay halis ugu jiraan in la kulmaan caabuqa ku dhaca kalagoysyada.
Dadka ka agdhaw marka la cabayo waxaa ay lakulmaan dhibaatooyinka caafimaad ee ay lakulmaan kuwa caba sigaarku. Waxuu saamayn ku yeelan karaa qofwalba iyadoo caruurta yaryar iyo hooyooyinka ka agdhaw ugu nugulyihiin. sigaarku waxuu yareeyaa muugaalka maqaarka maadama uu yaraynayo ogsijiinta maqaarka, waxuuna badiyaa kiimikaalo sun ah oo ku milma dhiiga iyo maqaarka. Arintaan ayaa keeni karta muuqaalka qofka oo xumaada.
Neefta dadka qaba sigaarka ayaa ah mid la dhibsado, waxaana uu saamayn ku yeeshaa niyada qofka maadama dad badani ay takooraan. Sigaarku maahan mid u wanaagsan nadaafada shaqsiga iyo mida bulshad uu la noolyahayba.
Barkhad 7 months ago
Mohamed osman nur 6 months ago
Sigaarka uma roono caafimaadka, dhaqaalaha iyo dhaqanka intaba, qeyb kasta oo jirka ka mid ah wuu saameeyaa sida habdhiska neefsiga, habdhiska wadnaha iyo xididada, habdhiska dheefshiidka, habdhiska kilyaha iyo qashin saarka, habdhiska maskaxda iyo dareemaha, habdhiska lafaha iyo murqaha, wuxuu keenaa cudurro kala duwan oo halis ah, waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 50 cudur inuu bini’aadanka u keeno, habdhiska neefsashada kaliya wuxuu ku ridaa 6 cudur.
Kansarka: sanbabada, afka, cunaha, hunguriga, caloosha, xiidmaha, beerka, kaadihaysta, ilmo-galeenka iyo ganaca “pancreas”.
Macaanka type 2, sigaarka wuxuu baab’iyaa unugyada kotaroola heerka macaanka ee jirkeena.
Madhalaysnimo, sigaarka wuxuu baab’iyaa uuna daciifiyaa ugxanta dumarka, hooyada sigaarka cabto ama lagu agcabo waxay halis mar waliaba ugu jirtaa madhalaysnimo, sidoo kale ragga wuxuu u keenaa shahwo iyo xawo yari, waa nooc ka mid ah madhalaysnimada oo dhalinyaro badan lagu arkay..
Indho la’aan, sigaarka wuxuu indhaha saaraa caadka loo yaqaano “Cataract”, wuxuu kaloo baabi’yaa unugyada aragga qaabilsan.
Sigaarka wuxuu keenaa in hooyada ay la kulanto waxa loo yaqaano “Ilmo-qoolan” ama “Ectopic Pregnancy” oo ah macnaheeda in uurjiifka uu ku abuurmo meel ka baxsan minka sida tubooyinka iyo meelo kale, tan oo halis wayn ku ah hooyada, maxaayeelay uurjiifka markuu korriimo bilaabo, wuxuu ku dhex dillaacaa hooyada, tan oo ay ku naf wayn karto.
Waxaad kaydsan doontaa lacag joojinta. Kaalmayso qof horay u joojiyay sigaarka kuna guulaystay. Taageero ka hel oo baro sida wax looga qabto welwelka iyo stress-ka.
Mohamed osman nur 1 year ago
ABDULLAHI ABDI JAMA 1 year ago
Halkaan waxaan jeclahay inaan uga hadalno dhibaatada sigaarka cabidiisa uleeyahay jirka bani-adamka .
Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu xaraantimeeyay cabida daroogada sida sigaarka iyo jaadka uma uu xaraamaynin ilaa uu u naxayo adoomadiisa sababtuna ay tahay in daroogadu ay waxyeelo daran u geysato xubnaha jirka qofka isticmaala .
Cabidda sigaarka waxay waxyeelo u gaysataa xubin kasta oo jirka kamid ah waxaana ugu horreya waa afka iyo ilkaha lagu cabaayo sigaarka .
Qiiqa ka imaanaya cabida sigaarka waxay marka ugu horeysa waxyeelo u gaysanaysaa ilkaha kaas oo dahaarka kore ee ilkaha u gaysanayso baab’a iyo madow ku sameeysma ilkaha kadibna ciridka ku keena caabuq iyo jeermis farabadan , markays ii badato waxyeeladu ay sigaarku u gaysanaayo afka iyo ilkaha ayaa halkaas waxaa ka dhalanaya cudurka kansarka oo ku dhaca carabka iyo bushimaha gudaha iyo banaankeda , wuxuuna keenaya cudurka inuu sii faafo oo kansarka sii waynaado ilaa uu gaaro heer qofku raashin qaadashadiisa ay yaraato ama ay istaagto si markaas qofka loo mariyo qaliin xagga afka ah oo kansarka lagu gooynayo
Dhibaatda uu sigaarku leeyahay waxaa cadeynaaya ururka caafimaadka aduunka ( world health organization ) oo loo soo gaabiyo ( WHO) in 3 milyan oo qof sanadkastaa u geeriyoodaan waxyeelada uu geysto cabida sigaarka gaar ahaana uu kansarku sabab u yahay sidoo kale xubnaha jirka kale uu waxyeelo u gaysto sigaarka waxaana kamid ah sambabada iyo wadnaha iyo beerka iwm.
Jirka bani-admku markasta waxa uu ubaahanyahay oxygen ama hawo nadiif ah oo aan wax wasakh ah lahayn kadib oxygenkaas waa inuu raaco dhiiga ilaa uu wadnaha ka tago kadibana sidaas uu ku gaaro xubnaha kale ee jirka kadibna waxa uu qofku dib usoo celinayaa carbon dioxide
Oo ah hawo wasakh ah oo uu jirku soo isticmaalay kadibna qashin saar ahaan u soo saaray
Qofku markuu cabo sigaarka waxa uu qaadanaya carbon dioxide-kii uu jirkiisu qashin saar ahaan u soo saari lahaa taasina waxay waxyeelo u gaysanaysaa xubnaha jirka sida sambabka iyo gaar ahaan wadnaha oo marka danbe cudur ku yimaada halbowlayaasha iyo xididada dhiiga u qaada wadnaha kuwaas oo jirka dib ugu faafiya
maxaa yeelay sigaarku waxa uu ka sameysanyahay tobacco iyo maado magaceed loo yaqaano nicotin oo ka kooban carbon dioxide
Dhibaatooyinka sigaarka qormadaydan kuma soo koobi karo laakin waxa loo baahnayahy qofka caba sigaarka inuu go’aansado marka hore joojinta gabi ahaanba isticmaalka sigaarka
Suhayb 1 year ago
Cabdixafiid 1 year ago
MARKA HORE AAN IS WAY DIINO XUKUNKA
UU SHARCIGA IS LSAAMKU KA QABO CABIDA SIGAARKA & CUNIDA BUURIGA/ TUBAKO
> shareecada is laamku waa xaaraan ti nimay say in la Is tic maalo wax walba oo maan dooriye ah ama Dhib NAFTA bini aadamka halis ku ah .
Waxaana udaliil aayadan
ولذلك فالتدخين حرام شرعاً، ومعصية يعرض الإنسان نفسه من خلالها إلى الهلكة فقد قال تعالى ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾، وهذه الحرمة تنسحب على البائع والمشتري والمُصّنع وكل من ساهم في عملية إيصال الدخان إلى المدخن،
فاالله أرحم بعباده منهم بأنفسهم، قد حرم عليهم ما يضرهم، قال النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار وهذا التدخين ضار ضررًا بينًا، بإجماع أهل المعرفة من أهل الطب، وبإجماع من عرفه وجربه، وما فيه من الضرر العظيم.
Dhibata da Caafi maad Ee ka dhalata?
3.Tirada dadka cabba sigaarka dunidaoo idil. (qiyaaso la sameeyay).
4.Walxaha ku jira sigaarka.
5. Qiiqa sigaarka imisa ayaa loo qeybiyaa?.
6.Walxaha ku jira sigaarka ee kansarka dhaliya.
7.Qabatinka Nikotiinka iyo hidda wadayaasha.
8.Halista caafimaad ee walxaha ku jiratubaakada.
.10.Sababaha keena cabbidda sigaarka.
11.Sababaha keena sii wadidda cabidda sigaarka.
12.Deegaannada caalamka iyo cabidda sigaarka.
13. Diinteena islaamka maxay ka qabtaa sigaarka oo horay Aan ku soo xusay midaas fur furitaankii
17. Maxaad ku bedeli kartaa nikotiinka?18. Faa’iidooyinka joojinta sigaarka.
Qormadan haddii Alle ii oggolaado waxaankaga hadli doonaa, waxyeellada caafimaadee ay leedahay tubaakada si guud, sigaarkana si gaar ah.
Anigoo cilmi ku salayn doono waxaana soo qaadan doono diraasado caalami ah oo dunida lagu soo bandhigay, tiro koobyo ay samaysay WHO oo ka hadlaya baahsanaanta balwaddan iyo aragtiyada diinta ee ku aaddan sigaarka.
Waxaan kaloo jeclahay inaan soobandhigo talooyin ku aaddan hababka qofka balwaddan isticmaala ka saacidi kara joojinteeda, anigoo si kooban usoo bandhigayo faa’iidooyinka uu ka helayo haddii uu joojiyo balwaddan.
Waxaan kaloosoo bandhigi doonnaa haddii Eebbe laga helo, hababka loola dagaallami karo loona ciribtiri karo balwaddan caalamka oo idil fara ba’an ku haysa.
Tubaakadu halkay ka timid asal ahaan?Sigaarku ma ahayn wax caalamku yaqiinaywixi ka horreeyay heliddii qaaradda Ameerika, dabadeedna gumaystayaashii reer yurub ee qaaraddaas qabsaday ayaa usoo qaaday yurub, halkaasna kaga sii faaftay dunida inteeda kale.
Tirada dadka cabba sigaarka dunida oo idilInkastoo dhammaan noocyada tubaakadu (sigaarka, buurida, badeecadda) ay waxyeello leeyihiin, haddana kan ugu caansan uguna waxyeello badan waa sigaaarka qiiqiisa la cabbo.
Ururka caafimaadka adduunka ayaa ku waramay in sanadkii 1998ki dad gaarayay 1.235 bilyan oo qof ay cabbayeen sigaarka, iyadoo dadka dunida tiradooda ay ahayd 5.926 bilyan oo qof, tiradaas dadka cabba sigaarka ayaa sii kordhayso, waxaana la filayaa in sanadka 2020ka ay gaarto 1.671 bilyan oo qof.
Waxyeelada caafimaad ee buuriga waa midmuhiim ah, waxa ayna ku xirantahay hadbasida loo cuno (la calaliyo, la ursado ama la dhuuqo) iyo xaddiga la cunayo.
Waxyeelada caafimaad ee sigaarka oo ah kan ugu isticmaalka badan buurida, waxaa ka mid ah kansarka sambabada, cudurradaku dhaca wadnaha iyo wareegga dhiigga.
ururka caafimaadka adduunka waxa uu ku qiyaasay sanadki 2002, in waddamada horumaray dhimashada ragga26% iyo dumarka 9% lala xariiriyay cabbista sigaarka.
Waddamada soo korayoayaa lagu waramay in isticmaalka buurida ay kor ukacdo 3.4% sanad kasta.
Walxaha ku jira sigaarkaSigaarku waxa uu ka koobanyahay kudhawaad 4000 oo walxood oo isugu jira hawo iyo walxo kiimikaad oo qabsada sambabada.
Hawooyinka waxaa ugu caansan; Karboon hal oksaydh (CO), Haydarojiin siyanayd (hydrogen cyanide), ammooniya, nitrojiin oksaydh.
Walxaha kale ee kiimikaad waxaa ugu caansan nikotiin, binsiin, daamur iyo bolooniyam.b) Haydarojiin siyanayd: waa sun loo isticmaalo qolalka dadka lagu toogto hawada.t) D.D.T.: waa sun cayayaanka lagu buufiyo.
x) Asitoon: waxaa lagu dhaqaa midabada si loo tir tiro
.Kh) Ammoniya: waxaa lagu nadiifiyaa dhulka sibirka ah.
d) Tolowin: waxaa loo adeegsadaa warshadaynta si wax loo milo
.r) Finool: waxaa lagu nadiifiyaa weelasha iyo sibirrada
.s) Biyotin: waa gaaska ku jira janta siigarka (wallaacadda)
.sh) Kadmiyom: waxaa loo isticmaalaa batariyada baabuurta.
1-Qaybta tooska ah: waa qiiqa uu liqayoqofka cabayo sigaarka, oo ah 15% xaddiga qiiqa ka baxayo sigaarka, waxa ayna ka koobantahay walxo si dhaqso ah loo gubay, sidaa awgeed isu uruursanaantoodu way yartahay ilaa xad.
2- Qeybta aan tooska ahayn: waa qiiqa uu tufayo qofka cabayo sigaarka, waxa ayna gaareysaa 85% qiiqa sigaarka ka baxaya, waxaana ku jira maaddooyin si tartiib ah u gubtay, sidaa awgeed isu uruursanaanteedu way sareeysaa, waxyeeladeeduna wuu ka daranyahay kan tooska ah, gaar ahaan dadka muddo dheeru banbaxayay qiiqaas, sida carruurta qofkacabba sigaarka, xaaskiisa iyo dadka kula nool hooyga ama goobta shaqada la jooga.Nin cabbaya kumannaan sigaar ah mar qura!!!!Walxaha ku jira sigaarka ee kansarka dhaliyaCabidda qiiqa buurida waxaa ku jira tiro aad u badan oo ah walxo awood badan oo keena kansarka, sida;akroliiniyobenzobayrin.
Qofka oo muddo dheer u banbaxo ama la kulmo walxaha ku jira sigaarka sidakarboonhal oksaydh,siyanaydhiyo isku dhisyada kale ee waxyeeleeya sambabka iyo unugyada halbowlayaasha ayaa la rumeysanyahay inay masuul ka yihiin waxyeelaynta wadnaha iyo jilicsanaanta kiisaska hawadaee sambabada, taasoo keenaysa emphysema iyo COPD.
Maaddadaakroliinee kansarka dhalisa iyo kuwa kale ee iyadalaga soo dhiraandhiriyay ayaa sidoo kale keena xanuuno dabadheeraada oo ku dhaca neefmareenka.
1- Walxaha kansarka dhaliya ee noole ka soo jeeda (organic carcinogenes):-Waxaa ku jira sigaarka in kabdan 19 walxood oo kansarka dhaliya.
2, kuwa ugu awoodda badanna waxaa ka mid ah:-Polynuclear aromatic hydrocarbons: waa walxo sidoo kale laga helo daamurka ama laamiga, waana maaddo aad u keenta kansarka.
Waxaa kale oo ay keenaan isbedel ku yimaada hidda sidayaasha (genetic mutation).
Akroliin,NitrosaminesNikotiin: waa kan ugu caansan walxaha kujira sigaarka, mana ahan oo qura kansar dhaliye, ee waxa uu dardar geliyaa kobcidda burooyinka halista ah (tumors).
■- Walxaha kansarka dhaliya ee shucaaca leh (Radioactive carcinogens):Marka laga soo tago walxaha kansarka dhaliya ee aan shucaaca, waxaa ku jira sigaarka xaddi yar oolead-210(210Pb) iyopolonium-210(210Po) labadoodaba waa kansar dhaliyayaal bixiya shucaac.
■Curiyahan Lead 210 waxaa laga dhaliyaa burburka curiyaharadium-226, burburkeeda waxaa ka soo baxaradon-222; lead 210 kaddibna wuxuu usii burburaabismuth-210iyo polonium 210, iyadoo soo saarta qurubyada biita (beta particles) labada tallaababa.
■ Walxaha ay ka koobanyihiin curiyayaashan ayaa dabadeed dega sambabada qofka sigaarkacabba, iyagoo ciriiri geliya socodka hawada; waxaana la soo helay in uruursanaanta walxahaas ay ku badanyihiin halka ay ku kala qeybsamaan bronchioles in kabadan 100 jeer inta ku jirta isku darka dhammaan sambabada.
■ Tan oo ka dhigaysa in dadka sigaarka cabba la kulmayaan waxyeelo ka badan dadka kale. Tusaale ahaan Polonium 210, waxa uu soo saaraa walxaha aadka u tamarta badan ee loo yaqaan qurubyada alfa (alpha particles), taasoo cufkeeda awgii, lagu tiriyo inaaney dhexgeli karin maqaarka in kabadan 40 micrometres, balse sameysa waxyeelo badan (oo lagu qiyaasay 100 jibbaar ka badan waxyeelada ayhiddewadayaasha ugeystaan shucaacyada kale) marka hab sigaarka oo kale uu ku keenayo in lagu soosaaro jirka gudahiisa, halkaas oo dhammaan tamarta lagu soo saaro ay nuugayaan unugyada jirka ee la deriska ah.
(Lead 210 wuxuu sidoo kale soo saaraa shucaacagamma).
Curiyayaasha shucaaca bixiya ee ku jira tubaakada waxa ay ka mid yihiin macdantabadan ee ku jirta ciidda, balse dusha sare ee caleenta dheg dhegga leh ee buurida ayay ku soo dhegaan si ka badan geedaha kale oo aan lahayn sifadan.
Si la filan karana shucaaca ka yimaada tubaakada way kala duwanyihiin, waxa ayna ku xiranyihiin hadba halka iyo sida uu u koray geedka tubaakada.Waxaa laga helay beerka sigaar cabbayaasha xaddi aad ufara badan oo ah curiyaha polonium 210, kana badan dadka aan cabin sigaarka.
Curiyahan waxa uu la midoobaa unugyada lafaha, isagoo shucaac joogta ah ku bixiya dhuuxa ku jira lafaha, waxa uuna sabab weyn unoqon karaa kansarka dhiigga ku dhaca ee loo yaqaan (leukemia), inkastoo tani aan weli la xaqiijin.
Qabatinka Nikotiinka iyo hidda wadayaashaB) Qurubka Nikotiin (Nic
Zakaria carraale 1 year ago
Saett osman 1 year ago
Sigaar cabiddu waxay keentaa cudur iyo naafonimo waxayna waxyeello u geysataa ku dhowaad dhammaan xubnaha jirka.
In ka badan 16 milyan oo Mareykan ah ayaa la nool cudur ka dhasha sigaar cabista. Qof kasta oo u dhinta cabbista sigaarka, ugu yaraan 30 qof ayaa la nool cudur daran oo la xiriira sigaarcabista. Sigaar cabiddu waxay sababtaa kansar, cudur wadne, istaroog, cudurrada sambabaha, sonkorowga, iyo cudur sambabada oo xannuunsan (COPD), oo ay kujiraan emphysema iyo boronkiitada raaga. Sigaar cabiddu waxay kaloo kordhisaa halista qaaxada, cudurrada indhaha qaarkood, iyo dhibaatooyinka nidaamka difaaca jirka, oo ay kujiraan rheumatoid arthritis.
Sigaar cabista sigaarka waxay gacan ka geysataa qiyaastii 41,000 oo u dhinta dadka waaweyn ee aan sigaarka cabin iyo 400 oo dhimasho ah oo dhallaanka ah sannad kasta. Qiiqa sigaarka lagu cabo wuxuu sababa istaroog, kansarka sanbabada, iyo cudurada wadnaha ee ku dhaca dadka waaweyn. Carruurta ay ku dhacdo qiiqa sigaarka lagu cabo waxay halis dheeraad ah ugu jiraan cilladda dhimashada degdegga ah ee dhallaanka, infekshannada daran ee neef-mareenka, cudurada dhegta ee dhegaha, neefta oo aad u daran, calaamadaha neefsashada, iyo koritaanka sanbabada oo gaabis ah.
Khadar jama 1 year ago
Sigaarku waa cudur aan dawo lahayn wuxu wax yelaa sambabada iyo beerka fadlin ka digtoonada halista sigaarka idinkoo racayaa talaabooyinka cafimaad